ဝီလျံ ဘွတ်| December 26, 2012 | Hits:12,114
0 | | စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာက တွေ့ရသည့် ရဲများ (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု မြင့်တက်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ –
– စီမံကိန်းကြီးများနှင့် လယ်ယာထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတွေက ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေရာမှာ မျှတမှု မရှိတာကြောင့် လူမှုရေး တင်းမာမှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊
– ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ တိုးတက်လာမှုက လူထုရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အရှိန်မြင့်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခြင်း၊
– ဆန္ဒပြသူတွေ၊ နိုင်ငံရေး အမြင်ကွဲလွဲသူတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေ အပေါ် အပြစ်ပေး အရေးယူမှု မရှိခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအထိ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အေးနေဦးမည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment U Thi Ha Tint Swe December 27, 2012 - 3:18 am	The Inquarry comissions should inquarry,check & report really correctly fully on the real cases because if they couldn’t do really it,can democratic reforms on Democracy,Human rights,National reconcilation,Peace & Reconstructed modern developments of Burma!
Reply	U Thi Ha Tint Swe December 27, 2012 - 3:20 am	The Inquarry comissions should inquarry,check & report really correctly fully on the real cases because if they couldn’t do really it,can defect democratic reforms on Democracy,Human rights,National reconcilation,Peace & Reconstructed modern developments of Burma!
Reply	haymar December 27, 2012 - 11:04 am	They do not look like policemen. Look like Military troops.